Qeesii Harargeetti masjiidaafi bataskaana ijaarsisaa jiran - BBC News Afaan Oromoo
Bataskaanaafi Masjiida ijaaramaa jiran
"Gadaamii Qidduus Gabri'eel Qullubbii, dhungachuuf bara 2007tti Harargee deemeen ture. Yeroos Kutaa Lallabaa Shawaa Kaabaa, bataskaana Maaramii Sandaafaa Bakkeettan tajaajila ture.
Akkuma tasaa bataskaanni Qidduus Raagu'el magaalaa Laangee, Qullubbii irraa fageenya dhiyoo irratti argamu jiguusaa bare," jedhu Malaa'ika Hiwoot Abbaa Akliilamaariyaam.
Hawaasni naannoo sanaa ammoo rooba waggaa eeganiitu hojjetanii galii argatu gatii taheef bataskaana hojjechiisuuf humna hin qaban.
Kanumaan bataskaana hojjechiisuuf yaadee achi ture. Ergasii maallaqa hawaasa Kiristaanaa muraasa Finfinnee jiran irraa qarshii waliitti qabameen bataskaanni ijaaramuu jalqabuusaa himu.
Akkuma hawaasa Kiristaanaa magaalaa Laangee warri Musliimaas harka qalleeyyii gatii tahaniif Masjiidni gaarii osoo ijaarameefii jedheen yaade jedhu.
'Lubni Saamu'el hojiirraa hin dhorkamne'
"Ani amantiin koo Kiristaanadha, Kiristaanummaan garuu ilmoo namaa gargara osoo hin qoodin akka tajaajjillu waan ajajuufin kana godhe. Namoonni akka isinii yaadan waan barbaaddan isinis akkasuma yaadaafii, godhaafii waan jedhuufi macaafni," jedhan.
''Anaafis Waaqni carraa kana waan naa kenneef Gumii Dhimmoota Islaamummaatti Waliigalaa Itoophiyaatti xalayaa barreesseen qarshii gaafadhe,'' jedhu.
Qeessii Harargeetti masjiidaafi bataskaana ijaarsisan
Warri gumiis baayyee gammadanii,'' kuni seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo Islaamni jalqabe yaadannoo ture dha. Kana qabattanii dhufuu keessaniif waan gaafattan hundaan isin tumsin,'' isaaniin jechuu dubbatu.
Kanumaan gara Gumii Dhimmoota Islaamummaa Finfinneetti iyyata akka isaaniif barreessaniif gaafachuun, isaan immoo gara masjiidota gurguddoo magaalaa keessa jiraniif akka isaan tumsaniif xalayaa barreessuu ni dubbatu.
Baatii Onkololeessaa 2011 xalayaan erga naaf kennamee booda, ''hojji qarshii walitti qabuu masjiida Nuur jedhamu kan Piyaassaa jiru irraan jalqabe,'' jedhu.
Bulchaan masjiida kanaas baayyee na gargaaraafi dursa naaf kennaa turan jedhu. ''Yeroo baatii lama hin guunne keessaatti qarshii kuma dhibba lamaa ol sassaabuu danda'eera,'' jedhu.
Masjiidonni isaan Finfinnee keessa deemanii gaafatan dursa isaaniif kennaa akka isaan gargaaran dubbatu.
Achii booda ijaarsi masjiida Bilaal kan Harargeetti argamuu jalqabee,''akkuma bataskaanaa dhaabadhee ijaarsisu kan masjiidaa irrattis akkasuma hirmaannaa nan taasisa,'' bataskaanni ani ijaarsisu gamoo darbii tokko kan qabu gatii taheef kan masjiidaas akkasuma akka tahuuf hojjechaa jirra jedhu.
Masjiidnis hojiin bu'uuraa raawwatee ol baasaa waan jiraniif ammas qarshii walitti qabaa jiraachufi namoonnis biyya keessaa fi biyya alaarraa lakkoofsa herregaa banameen qarshii galchaa akka jiran dubbatu.
''Warri masjiidota Finfinnee na amananii qarshii kumaatamaan naa kennanii masjiida kana ati ni xumursiista yoo naan jedhan edaa uummata Itoophiya jaalaaltu bita jedhee,'' jedhan.
''Namooti Kiristaanaa muraasni amantiin keenyi bu'uurri, dalagee fi gadeen isaa jaalala tahuu hin hubanne yoo waan gaarii hin dubbanne animmoo na barsiisa, tokko taanee jiraachuu akka dandeenyu ni hima. Kanaaf uummannimmoo anaaf jaalala addaati qaba.''
''Gammachuun warreen kaan tajaajiluu caalu hin jiru, gooftaan keenyi Yasuus Kiristoos lafa kanarra yeroo deddeebi'e kan nu barsiise namoota tajaajilu dha.''
Tajaajila isa bataskaana hojjechiisuun kennu caalaa yeroo masjiida hojjechiisu na gammachiisa, ''ani amantii tokkoof qofa yoon dhaabadhe Waaqayyootiin ni qaanessa. Waaqni kennaa isaa addunyaa hundaaf arjoominaan kenna burqaa kanarraa dhuguu koof gammachuu guddaan qaba'' jedhu
''Naannoo Harargee lafa isaan jiraatanitti waan isaan mudate dubbatu,''aanaalee Qarsaafi Kurfaa Callee jedhamanitti bataskaanni lamni gubateetu ture.''
Magaalaa Laangeetti garuu obbolaan keenyi Musliimaafi warri Qeerroo magaalattii marsanii yeroo iddoon kaan gubatu bataskaanni keenyi nagaan eegame ture.
''Daandii jaalalaal fi tokkummaa jalqabne kana qabanneetu gara fuulduraa deemuu qabna jedheen yaadaa.'' jedhu.
Abbootii amantaaf amantiin keenyi gargar haa tahuyyuu malee jaalalaan tokko, Waaqni keenyis tokko gatii taheef waa'ee tokkummaa irratti akka hojjennuuf ergaa koo na dabarsa jedhu.
Gumii Dhimma Islaamummaa Waliigalaa Itoophiyaatti miseensa kan tahan Ustaaz Kaamiil Shamsuu Qeesiin kun gumii isaanii dhufanii xalayaa barreessifachuufi qarshii kuma dhibbaa ol walitti qabuu quba akka qaban dubbtaniiru.
Ustaaz Kaamiil,''rakkoo qaamota nageenya hin barbaanne bira malee ummata bira ammallee rakkoon hin jiru, jaalala malee'' jedhu.
Hogganaa Mana Kiristaanaa Waashingitan: 'Lubni Saamu'el hojiirraa hin dhorkamne'
Boordiin filannoo namoota bu’aa filannoo ragaa qabatamaarratti hin hundoofne ibsan akeekkachiise
KALLATTIIN Buufataaleen filannoo sagalee lakkaa'aa jiru, kaan ammoo bu'aa beeksisaa jiru
Kaaba Gondar buufata filannoorratti hidhattootni haleellaa geessisuun lubbuun poolisii tokkoo darbe
Shawaa Lixaa naannawa buufata filannootti haleellaa raawwateen lubbuun darbe
Naannolee tokko tokkotti adeemsi sagalee kennuu adda citeera-Boordii filannoo
'Guyyaan har'aa lammilee Itoophiyaa hundaaf guyyaa guddaadha' - MM Abiy Ahimad
Namni Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa argachuuf jecha sobeera jedhame to'atame
Bu'aan Filannoo biyyaalessaa ja'affaa Itoophiyaa yoom beekama?
Guutuu Waayyoo -Simbira Booranatti qofaa argamtu beektuu?